Ecology Coral Reef | Fiaretana haran-dranomasina
Ecology Coral Reef
Inona no atao hoe faharetana?
Toetoetran'ny fiaretana haran-dranomasina
Fitantanana miorina amin'ny famoronana (RBM)
Inona ny RBM?
Fa maninona no mitondra ny RBM?
Torohevitra momba ny fitantanana
RBM amin'ny fampiharana
Fomba fampidirana hafa
Ny haran-dranomasina dia anisan'ny tontolo iainana sarobidy indrindra eto an-tany. Na dia eo amin'ny 0.1% amin'ny fanambanin'ny ranomasina fotsiny no rakofan'izy ireo, dia fonenan'ny karazan-dranomasina farafahakeliny farafahakeliny ary manohana karazan-trondro manodidina ny 4,000 sy karazana corals 800. ref Na izany aza, ny sandany dia mihoatra lavitra noho ny fahasamihafan'izy ireo biolojika, satria manome entana sy serivisy tsy tambo isaina ho an'ireo vondron'olona amoron-tsiraka izay miankina amin'izy ireo. Ohatra amin'izany ny serivisy, ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ary ny fialamboly, ny fiarovana ny sisin-dranomasina ary ny loharanon'ny fitambarana fanafody. ref
Ny haran-dranomasina dia zavamananaina velona ao amin'ny phylum Cnidaria. Misy karazana haran-dranomasina roa lehibe: haran-dranomasina malefaka sy haran-dranomasina (antsoina koa haran-dranomasina 'mafy'). Ny vato harana vato ao amin'ny baiko Scleractinia no vato harana tompon'andraikitra voalohany amin'ny fananganana vatohara amin'ny alàlan'ny famokarana sy ny fivoahan'ny calcium carbonate (oh: CaCO3, na vatosokay). Ny ankamaroan'ny haran-dranomasina manorina vatohara dia manana fifandraisana simbiotika amin'ny ahidrano dinoflagellate fotosintetika antsoina hoe zooxanthellae (na Symbiodiniaceae, izay nantsoina hoe Symbiodinium). Ny fifandraisana dia raisina ho toy ny fifampiraharahana, izay ahitan'ny haran-dranomasina tontolo voaaro, gazy karbonika (CO2) sy ny otrikaina (azota ary fosforôra) ho an'ny ahidrano, ary ny ahidrano kosa manome oxygen (O2) ary ny karbaona mankany amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fotosintesis, izay mahatratra 95% ny filan'ny angovo biby goavambe.
Ireo zanatany haran-dranomasina dia raisina ho zavamananaina maodely satria izy ireo dia ahitana singa morpholojika na polyps miverimberina. Ny fomba fandaminana ireo polyps ireo dia mibaiko ny endrika fitomboan'ny zanatany vato, na ny morphology. Ny teny famaritana mahazatra dia misy ny sampana, ny tsanganana, ny lehibe, ny ravina, ny laminera, ny encrusting ary ny fiainana malalaka. ref
Polipaly clonal marobe amin'ny rantsana iray Porites zanatany any Aostralia. Sary © Margaux Hein
Ny haran-dranomasina dia afaka miteraka amin'ny alàlan'ny fiterahana amin'ny firaisana sy ara-nofo. Ny fiterahana ara-pananahana dia mitranga amin'ny alàlan'ny famolavolana, izay misy polipan'ny haran-dranomasina dia mizara ho clones mamorona polyps roa, sy ny sombintsombiny, izay potiky ny zanaky ny haran-dranomasina ary avy eo mamindra amin'ny toerana vaovao eo amin'ny haran-dranomasina amin'ny toe-javatra mety. Ny zanatany haran-dranomasina vaovao sy tsy manam-paharoa dia miforona amin'ny alàlan'ny fiterahana. Misy fomba roa amin'ny fananahana ara-nofo: fampielezam-peo fampielezam-peo (izay amnisan'ny zanatan'ny haran-dranomasina ny tsirinaina sy atody ao anaty rano) ary ny fihodinana (izay ahatongavan'ny zezika ao anatiny).
Ny haran-dranomasina maoderina (an'ny Holocene-Anthropocene) dia misy any amin'ny tropika eo anelanelan'ny latitude 30 degre Avaratra sy 30 degre atsimo, miaraka amina faningana sasany. Ny haran-dranomasina amin'ny ankapobeny dia ferana amin'ireo faritra ireo satria ny fifandraisany simbiotika amin'ny zooxanthellae fotosintetika dia mitaky mari-pana manokana, hazavana ary sira. Ny faritra biogeographic lehibe misy ny haran-dranomasina dia ao amin'ny Oseana Atlantika, Aostralia, Ranomasimbe Indianina, Moyen Orient, Ranomasimbe Pasifika ary Azia atsimo atsinanana. ref
Misy karazana haran-dranomasina efatra:
Haran-dranomasina manidina izay maniry eo akaikin'ny morontsiraka ary izy no tanora indrindra amin'ny fampandrosoana
Haran-dranomasina izay misaraka amin'ny morontsiraka amina rano iray antsoina hoe lagoon
Vatovoam-bato fa dia haran-dranomasina misaraka sy mitoka-monina izay matetika eo anelanelan'ny haran-dranomasina sy haran-dranomasina sakana
Atoll izay miorina amin'ny haran-dranomasina manodidina ny nosy. Ny nosy dia mety hidina ambanin'ny tany rehefa mandeha ny fotoana ary mamela amboaran-haran-dranomasina mihidy lakana afovoany.
Haran-dranomasina manidina avy ao amin'ny East Portland Fish Sanctuary, Jamaica. Sary © Steve Schill / The Conservancy momba ny natiora
Ny faritra samihafa amin'ny haran-dranomasina dia voasokajy ho faritra geomorphologic noho ny tsy fitovian'ny hazavana, ny hetsiky ny onja, ny mari-pana ary ny sedimentation. Ireo faritra ireo dia mety tsy mitovy arakaraka ny karazana vatohara (oh: ny sisiny, sakana, sns.) Fa amin'ny ankapobeny dia misy lagonona, vatohara, havoana, harambato ary haran-dranomasina aloha. Ny fivondronan'ireo vondrom-piarahamonina dia mazàna miovaova amin'ny faritra amoron'ny haran-dranomasina sy manerana ny faritra noho ny toe-piainan'ny tontolo iainana sy ny fahaizana mifaninana amin'ny karazana haran-dranomasina.
Betsaka ny fifandraisana biolojika ao anatin'ny vondrom-piarahamonin'ny haran-dranomasina izay misy fiantraikany amin'ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny haran-dranomasina, anisan'izany ny fifaninanana, ny ahitra ary ny fiaingana (izany hoe corallivory). Satria ny habaka ara-batana dia loharano lehibe mametra eo amin'ny haran-dranomasina, ary ny haran-dranomasina dia zavamiaina sessile, mifaninana amin'ireo zavamiaina benthic maro hafa izy ireo, ao anatin'izany ny haran-dranomasina, ahidrano, spaonjy, hidroktoraly (na 'haran-dranomasina'), ary haran-dranomasina malefaka. Ny fifaninanana eo amin'ny haran-dranomasina sy ny ahidrà dia mihabetsaka hatrany amin'ny fitomboan'ny fanakorontanana amin'ireo haran-dranomasina nandritra ireo folo taona lasa.
Ny mponina salama ahitra sy maro karazana dia manakiana ny fanelanelanana amin'ny fifaninanana haran-dranomasina. Ny trondro ahitra indrindra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny faharetan'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fanokafana toerana ho an'ny fananganana haran-dranomasina sy ny fampihenana ny fihenjanana amin'ireo zanatanin'ny haran-dranomasina misy.
Ireo zavamananaina mihinana vato harana, antsoina hoe corallivores, dia mandany ny vatam-bato, ny moka ary ny taolana. Anisan'izany ny trondro sy ny invertebrata saika avy amin'ny vondrona taxonomic rehetra, ao anatin'izany ny trondro, sifotra, kankana ary foza. Ny fahasimbana amin'ny vatan'ny vatohara na ny taolam-paty dia mitaky fotoana sy hery ho an'ny haran-dranomasina mba hamelombelona sy hanarenana, ka mihena ny taham-pitomboan'ny haran-dranomasina, ref fahaizana miteraka, ref na fitomboan'ny aretin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fanaovana volo. ref
Ny sifotra mihinana vatohara Coralliophila galea manome sakafo amin'ny haran-dranomasina elkhorn Karaiba Acropora palmata, mamela taolana fotsy ao aoriany. Sary © Elizabeth Shaver
Toerana onenana mifandray
Ny haran-dranomasina dia matetika mifandray amin'ny fandriana ahidrano sy honko. Ireo fonenana ireo dia azo ampifandraisina betsaka, ary ity fifandraisana ity dia mety ho zava-dehibe indrindra amin'ny fitazonana ny fiasan'ny haran-dranomasina.
Ny ahitra ahidrano dia hita any amin'ny vatohara any aoriana, amin'ny farihy, ary amin'ny toerana misy fialofana. Izy ireo dia mifanerasera amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fandraisana sy fanamafisana ny antsanga, ny bisikileta misy otrikaina ary ny fanomezana toeram-ponenana ho an'ny trondro sy karazam-biby tsy mivadika. ref Ny fandriana ahidrano koa dia mety hampihena ny habetsaky ny aretina haran-dranomasina. ref Ireo honko dia hita eny amoron'ny morontsiraka ary mifanerasera amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny antsanga miorina amin'ny tany, ny bisikileta misy otrikaina, ary ny fanomezana onenana ny garderie ho an'ny zavamiaina haran-dranomasina. Ny tombontsoa hafa avy amin'ny ala honko sy ny ahidrano dia misy ny fihenan'ny vokan'ny onja sy tafio-drivotra, ref mihetsika toy ny filentehan'ny karbaona, ary mampihena ny fiantraikan'ny fanamasinana ny ranomasina. ref
Mangroves any amin'ny Repoblika Dominikanina. Sary © Rachel Docherty / Flickr Creative Commons
Course Online Resilience Coral Reef, Lesona 1: Ecology Coral Reef
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEcosystems Coral Reef
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEcology Coral Reef
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitantanana ny Herbivores amin'ny fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana Coral Reef: misy tatitra famintinana ho an'ireo mpitantana sy mpampiofana